Distimo: Nchịkọta Ngwa, Ntugharị na Applọ Ahịa App | Martech Zone
M ọdịiche na-enye free mobile ngwa nchịkọta ikpo okwu maka ndị mmepe yana data ahịa ngwa. Ngwurugwu Distimo na-eme ka ndị mmepe soro ngwa ngwa ngwa mkpanaka, ntinye ngwa, yana ntụgharị ngwa maka mkpọsa na ngwa nke aka ha n'ofe ọtụtụ ụlọ ahịa ngwa. Distimo n’enye ngwa ha nchịkọta n’efu, na-enye ha ohere ichikota mpịakọta nke data na imeziwanye ụzọ ha si akwụ ụgwọ ha, AppIQ.
Distimo si AppIQ na-enye data asọmpi kwa ụbọchị maka ngwa gafere ọtụtụ ahịa ahịa ekwentị. Ọ na-enyere ụlọ ọrụ aka ịme nke ọma, mkpebi dị oke mkpa, ka ha nwee ike ịsọ mpi n'ahịa ngwa ahịa ụwa.
Ebumnuche nbudata na-enyere gị aka nyochaa òkè ahịa gị ma jiri ihe nbudata gị na ndị na-asọmpi gị na otu eserese. Ihe omume dịka mgbanwe ọnụahịa, edepụtara aha na mmelite na-enye gị ohere ịtụle mmetụta nke mmemme ọ bụla na nbudata. Atụmatụ ego ha na-enweta na-enyere gị aka nyochaa ego ha ga-enweta maka ndị ọ bụla na-asọmpi ma soro ebe ego ha si enweta site na mba, ngwaahịa na usoro azụmahịa.
Distimo nwekwara ya nwere ngwa mkpanaaka na-enye gị ohere soro downloads, ụtụ, ratings na reviews tinyere ọzọ atụmatụ dị ka omume nsuso maka iri na isi ngwa na-echekwa. Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ AppIQ, data AppIQ gị niile dịkwa na ngwa ahụ, na-enye gị ohere iji atụnyere nbudata na data data gị na asọmpi.
Ọ bụrụ na ị na-agba Adobe Analytics, ị nwere ike iwekọta data Distimo ozugbo - na enweghị ọnụ - site na ha Adobe Jenesis API nhazi.
Tags: Adobe nchịkọtaihe omumutọghatara ngwa ahịachiridistimomobile ngwamobile ngwa nyochadata mkpanaka ngwa ngwa mkpanakamobile ngwa mgbanweomniture nchịkọta